पुष्पकमल, शेरबहादुर र सिकेका मालिक एउटै ! - Karobar National Economic Daily
पुष्पकमल, शेरबहादुर र सिकेका मालिक एउटै !
query_builderFebruary 27, 2017 2:19 PM supervisor_accountकारोबार visibility1565
रफत सञ्चार क्लमा नेता बिजुक्छें
सेना परिचालन गरेर पनि स्थानीय निर्वाचन
भक्तपुरः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायाणमान बिजुक्छेंले वर्तमान सरकार रहेसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबमा आज भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बिजुक्छेंले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताए ।
उनले जहिलेसम्म संशोधन हुँदैन, त्यसबेलासम्म सरकार नरहने भएकाले यो सरकारको औचित्यता नभएको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै सेना परिचालन गरेर भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस् भन्ने खेलमा विदेशी चलखेल भएको भन्दै खण्डखण्डमा भए पनि निर्वाचन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिके राउत एउटै शक्ति केन्द्रबाट परिचालन भएको उनले दाबी गरे ।
‘काठमाडौँमा विदेशी संयन्त्रले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालको सरकार काठमाडौँमै रहेका विदेशी संयन्त्रको निर्देशनमा चलेको छ । काँग्रेस र माओवादी एउटै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित भएका छन् । पार्टी फरक हुनुको औचित्य छैन ।’
अध्यक्ष बिजुक्छेंले मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गर्दैमा निर्वाचन प्रभावित नहुने जिकिर गरे । मधेसी मोर्चाले उठाएका माग तराईका जनताको नभएको बताउँदै उनले तराईका सबै ठाउँमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले यदि अवरोध भए सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेमा बताए ।
उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने बताउँदै नयाँ सरकार गठनपछि मात्र निर्वाचन हुने उल्लेख गरे । ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले खुटा कमाउन हुँदैन’, उनले भने, ‘यदि निर्वाचन गर्ने वातावरण आएन भने सरकारले पालेका सेना, प्रहरीको के काम ?’
सरकारले जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यदि निर्वाचन गर्न सकिएन भने सेना परिचलान गर्नुको औचित्य नहुने पनि जोड दिए । उनले संविधान संशोधनमा एमालेले लचकता अपनाउनुको पछाडि विदेशी दबाब हुन सक्ने बताउँदै संविधान संशोधन पारित भए देश नरहनेसमेत बताए ।
संविधान संशोधन नभएसम्म वर्तमान सरकार टिक्ने र वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सत्ता समिकरण बद्लिने सम्भावना रहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नरहने गरी थ्रेस होल्डको कुरा आइरहेकाले थे्रस होल्ड सङ्ख्याको आधारमा नभई विचारको आधारमा गरिनुनपर्ने बताए ।
बिजुक्छेंले संविधान संशोधन प्रस्तावको पार्टीले निरन्तर रूपमा विरोध गरिरहेको बताउँदै संविधान संशोधनमा एमालेले अपनाएको लचकता देश र जनताको हितमा नभएको बताए ।
निर्वाचनको समयमा सिडियो सरुवा गर्नु भनेको आफना मान्छे पठाएर चुनावलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र भएको बिजुक्छेंले बताए ।
‘नेपाल प्रहरीको आईजीपिको विषयमा जसरी भागबण्डाको खेल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यसले नेपालको सुरक्षा निकायमा समेत आर्थिक चलखेलले ब्यापकता पाएको र यो देशको अहितमा छ ।’
निर्वाचन संविधान संशोधन